MyWeedSeeds.com | Tenga Marijuana Mbeu
Tarisa uone mbeu yedu Nyowani!
AK 47 XTRM mbeu
More info NEW!
AK 47 XTRM Mbeu dzechikadzi
AK 47 XTRM Auto Feminized mbeu
Amnesia Trance yakasimudza mbeu
Autoflower Mukadzi wechikadzi Combo mbeu
Mbeu dzeBlueberry Crisp
Borderliner XTRM Mbeu dzevakadzi
Bianca feminized mbeu
Isingaperi Autoflower Mbeu dzechikadzi
Isingaperi Yemukadzi mbeu
Sarudza mbeu yako yaunofarira yevakadzi pano!
Mazhinji magaidhi anoonekwa
Kurima mbanje mubindu rako
Kukohwa mbanje dzako zvirimwa
Kuchengetedzwa kwekunze kwevarimi
Vatangi vanotanga kukura zvikanganiso
Mbeu dzinopisa mbanje!
Chirikadzi Chirungu XTRM Simba [F]
Mbeu dzeMedijuana [F]
Super Nova mbeu [F]
Mbeu dzechizi [F]
Chiremba CBD oiri
Mbanje yekurapa iri kuramba ichiwedzera kufarirwa mazuva ano. Pakupedzisira mitemo inochinjirwa chinangwa che "kurapwa mbanje yekushandisa" pasirese. Vanhu vazhinji uye vane marwadzo asingagumi nezvirwere vanozvinyudza mukushanda kunoshanda kweiyo CBD kukosha kwe "Cannabis sativa". Kune huwandu huri kuwedzera hwezvidzidzo pamhedzisiro yeTHC / CBD nhanho pazvirwere zvakasiyana siyana uye syndromes, zvine mhedzisiro inoshamisa.
Masora ekurapa anogona kushandiswa munzira dzakawanda. Chinonyanya kuzivikanwa kuputa kana kuputa mbanje. Unogona kumanikidza sora mafuta kana kugadzira tincture. Kune zvekare zvinonaka zvekubika kugadzirira mbanje muchikafu chako. Isu takaita sarudzo yemhando dzakanakisa dzembanje dzekushandisa pakurapa. Aya maratidziro akasarudzwa pane izvo THC zvemukati uye kukura hunyanzvi. Miti yacho iri nyore kuchengetedza uye inoda hunyanzvi hwekutanga.
Enda kumbeu dzekurapa
Mbeu dzechikadzi dzakagadzirwa nemajini kuti dzive zana muzana revakadzi. Izvo hazvina ma chromosomes echirume. Mbeu idzi dzese dzinoita maruva kuva hadzi dzevakadzi mbanje. Iyi inzira inoshanda kwazvo uye inoshanda yekurima mbanje yako. Kwete kubvisa vanhurume kubva kumiti yemukadzi, kushandisa kwakanyanya kwenzvimbo yako yekukura uye kugadzira goho rakakura remasora Iyo sarudzo yakanaka kune vanhu inoda kukurumidza uye nyore kurima maitiro. Mbeu yevakadzi inongova mhinduro iri nyore kune avo (kunyanya vashandisi vezvekurapa) vakasangana nedambudziko rekukura kwemasora pasina ruzivo rwekukura.
Nembeu dzakajairwa, mabukira ako anozove angave echirume kana echikadzi, uchafanirwa kumeresa imwe mbeu kuti ugadzire goho rako raunoda uye ushandise zvakakwana nzvimbo yako yekukura. Kubatsira kwembeu yechikadzi ndeyekuti varimi vanosarudza kuti vangada kudyara zvakadii, sarudza iyo mbeu uye vatange kurima kwavo. Saka tanga yako inokurumidza & yakapusa kukura ruzivo nhasi!
Enda kune mbeu dzevakadzi
aka Mbeu dzesora
Mari yako mbanje bhanga muCanada. Kupakata kwakangwara, sarudzo dzakawanda dzekubhadhara uye kutumira kwepasirese.
Mbanje kukura maguidhi
Yakakura yemahara kukura giraibhurari raibhurari. Pano iwe unowana ruzivo nezve mbanje aka cannabis kubva pambeu kusvika pakukohwa.
Mashiripiti howa truffles & kukura makiti
Tsvaga iyo psychedelic rwendo rwemashiripiti howa truffles uye "Yakagadzirira Kushandisa" mashiripiti howa kukura makiti.
Gara up to date!
Anoshamisa mapikicha, anopwanya nhau, anotyisa mavhidhiyo & anonaka (zvekurapa) mbanje mabikirwo.